/blog/Akụkụ Archive maka "Masteron Propionate"
Dr. Patrick Young dere na Masteron Propionate .
Ihe niile banyere Masteron (Drostanolone propionate) 1. Kedu ihe bụ Masteron Propionate? 2. Mastrone propionate ọkara ndụ 3. Masterone propionate ọgwụ na-eji 4. Masteron propionate mmetụta zuru ezu 5. Masteron propionate VS enanthate 6. 7 ọgwụ na-eme ka Masteron propionate. Masteron propionate okirikiri 8. Mmetụta mmetụta nke Masteron propionate 9. Zụta 10 Masteron propionate. Masterone propionate reviews Gịnị bụ [...]
Dr. Patrick Young dere na Masteron Propionate na 1 Comment .
Ịzụta Masteron Propionate Masteron Propionate bụ steroid steroid androgenic anabolic nke nwere aha sayensi Drostanolone Propionate nke sitere na dihydrotestosterone (DHT). Ihe dị iche bụ na e gbanweela Masteron site na ịgbakwunye otu akụkụ methyl nke na-egbochi hormone ahụ site na nbibi site na enzyme 3-hydroxysteroid dehydrogenase nke a chọpụtara na ọkpụkpụ skeletal. The added [...]